नेपालको औद्योगिक ऐन सबैभन्दा कमजोर छ
यो गहन विषय हो । लागानी सम्मेलन त गर्नुपर्छ । को–को मान्छे के–के चिजमा लगानी गर्न चाहन्छ । लगानी सम्मेलन नगरी थाहा हुँदैन । हाम्रो यहाँ के–के सम्भावना छ, त्यो विषयमा लगानी गर्न विदेशबाट को आउने, उसको चाहना के छ भन्ने सबै थाहा हुने भएकाले लगानी सम्मेलन आवश्यक भन्ने सबै थाहा हुने भएकाले लगानी सम्मेलन आवश्यक छ । नेपालमा खानी, ऊर्जा, खेलकुद सबै क्षेत्रले लगानी पर्खिरहेका छन् । अबको क्रान्ति भनेको आर्थिक क्षेत्रको क्रान्ति हो । त्यसको लागि देशमा लगानी सम्मेलन गर्नु जरुरी छ । त्यसकारण लगानीका क्षेत्रदेखि लगानीका स्रोतसम्मको आँकलन गर्न सकिने र विकासको एउटा स्वरुप वा मार्गचित्र कोर्न सकिने आधारहरु लगानी सम्मेलनले दिएको छ ।
सामाजिक परिवर्तन सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो
कम्युनिष्ट राजनीतिबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका घिसन अहिर यादव सियारी गाउँपालिका वडा नं. ३ रुपन्देहीका वडा अध्यक्ष हुन् । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा ध्यक्षमा विजयी भएका यादव जनताको माझमा रहेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन् । वडाकै विकासले देशको विकास गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्ने वडा अध्यक्ष घिसन अहिर यादवसँग जनमञ्च साप्ताहिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :
उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई जोड दिनुपर्छ
सरोज अधिकारी सियारी गाउँपालिका–७ रुपन्देहीका वडा अध्यक्ष हुन् । जनचाहनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने अधिकारी सियारी गाउँपालिकामा विकासप्रेमी युवाको रुपमा पनि चिनिन्छन् । स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएर गाउँपालिकाका बैठकहरुमा स्वरोजगारकै बारेमा बढी कुरा उठाउने अधिकारी आफैं पनि एक उद्यमी हुन् । राज्यले वैदेशिक रोजगारको लागि दोस्रो र तेस्रो मुलुक गएका युवाहरुलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने धारणा राख्ने अधिकारीले युवापुस्तालाई सुहाउँदो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
ठग विपेन्द्रराज बतासबाट ठगिएका पहारी र श्रेष्ठको प्रश्न : मुद्दा दर्ता हुँदा पनि कास्की प्रहरीले किन पक्रिएको छैन ?
बतासजीसँग हाम्रो ५/६ वर्ष पहिलेदेखि चिनजान हो । हामीले पोखरामा होटल सिम्रिक बिक्रीमा छ भन्ने कुरा दाजु–भाइले थाहा पाएपछि त्यो लिन इच्छुक भयौँ । त्यो होटल रामकृष्ण देवकोटाको नाममा थियो । उहाँलाई हामीले बैना ग-यौँ । पाँच महिनासम्म त्यो हामीलाई पास गरेर दिन सक्नुभएन । विपेन्द्रराज बतासले टोप बहादुर परियारबाट जग्गा लिनुभएको रहेछ । बतासले रामकृष्ण देवकोटालाई बेच्नुभएको रहेछ । तर टोपबहादुर परियारसँग मुद्दा रहेछ । परियारले जग्गा आफूले नबेचेको र धितो स्वरुप राखेको बताउनुभएको रहेछ ।
नेपाली बीमा क्षेत्रमा लगातार ३८ वर्षसम्म काम गरेको अनुुभव सँगालेका व्यक्ति हुुन्, विश्वराम तिमिला । सन् १९८१ मा भारतीय बीमा कम्पनीको रुपमा नेपालमा सञ्चालित ओरियन्टल इन्योरेन्स कम्पनीबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका तिमिला अझै पनि नेपाली बीमा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । बीमा क्षेत्रमा कुुशल व्यवस्थापकको रुपमा परिचय स्थापित गरेका तिमिला बीमा क्षेत्रका लागि एक आदर्श व्यक्ति हुुन् ।
छ महिनाभित्र पीडितले राहत पाउँछन्
२०६९ सालदेखि अहिलेसम्म ७ वर्ष भयो । आजसम्म मैले काम गर्न पाएको छैन । बल्ल मलाई काम गर्ने ढोका खुलेको छ । त्यही पनि अवरोध कायम छ । काम गर्न सुरु गर्नेबित्तिकै मसँग संलग्नै नभएको परिवारका सदस्यको खाता बन्द गर्ने काम भइरहेको छ । यद्यपि सयमा ५० वटा बाटोहरु खुल्ला छन् । म काम गर्दै छु । ६ महिनाभित्र ओरेन्टल पीडित र हाउजिङ पीडितले केही राहत पाउनेछन् । क्यास बाढ्छु भन्न म सक्दिनँ । किनभने बजारको अवस्था यही हो । ठूला बुकिङकर्तालाई हाम्रो अपार्टमेन्ट लिइदिनुस् त्यसको केही अंश सानो डिपोजिटरलाई दिनुहोस् जसले फ्ल्याट किन्न सक्दैन ।
जनप्रतिनिधिले राजनीतिक भूमिका खेल्नुहुँदैन
अरुणकुमार शाही सियारी गाउँपालिका–१, रुपन्देहीका वडा अध्यक्ष हुन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट निर्वाचित शाही सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा पनि परिचित छन् । सामाजिक कार्यहरुले गाउँलेको मन जितेका शाहीको सुन्दर वडाको रुपमा सियारी–१ लाई विकास गर्ने सपना छ । उनै शाहीसँग जनमञ्च साप्ताहिकका पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिँदै आइरहेका छौँ
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित ‘आर्डेन द ब्युटी प्वाइन्ट’ ब्राइडल हेयर स्टाइल तथा मेकअपका लागि सर्वाधिक लोकप्रिय मानिन्छ । यसैको संस्थापक एवं ‘मेकअप’ अनि ‘हेयर स्टाइलिस’ राजेश घिमिरे विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर यस पेसामा आबद्ध छन् । उनी यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा बेहुला–बेहुली सिंगारलाई परम्परावादी सोचबाट भद्दा ढंगले गरिन्थ्यो । यसमा आमूल परिवर्तन ल्याएर विवाहको दिन उनीहरूलाई हिरो–हिरोइन वा मोडलभन्दा कम नदेखिने बनाउन ‘मेकअप’ अनि ‘हेयर स्टाइल’लाई एउटा उद्योगको रूपमा विकास गर्ने कामको थालनी राजेशबाटै भयो ।
‘कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भयो’
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाभन्दा विकासको हिसाबले सफल गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकामा विकास बढी नै भए पनि कर्मचारी अभावका कारण सोचेजति काम हुन नसकेको प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर बस्नेतको भनाइ छ ।
भन्सारमा मूल्यांकनको समस्या
विकास चौधरी सञ्चालक, सेन्ट्रल मलउद्योगी, सुरभी पोलिमर्स प्रा.लि.
लगानीमैत्री वातावरणका लागि राज्यहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ
सोम अधिकारीअरिहन्त कमर्सियल, विराटनगर
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ
पुन्य भट्टराई सञ्चालक होटल एसियाटिक, विराटनगर
हाम्रो देशको लगानीकर्तामा अर्बौंको योजनामा लगानी गर्ने क्षमता छैन
देश संघीयतामा गएपछि देश समृद्धिको बाटोतर्फ गएको छ । अहिले भरखरै लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न भएको छ । ठूला–ठूला आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साथको अपेक्षा लिएको छ । हामी निजी क्षेत्रपनि सकारात्मक छौँ । आउने दिनमा नेपाल लगानीयोग्य र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।
नयाँ पुस्ताका व्यवसायीले समस्यासँग जुध्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्छ
नयाँ पुस्ताको व्यवसायी हुनेले शिक्षा बाहिरबाट लिएको भए पनि काम नेपालमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीजस्तो युवापुस्ताले बुझ्दैन । हामीले सिक्ने दुईवटा कुरा हुन्छन् । आफूभन्दा ठूलो मान्छेले के गर्दै छन् र अन्य व्यवसायीले के गर्दै छन् । नयाँ पुस्ताले आफूभन्दा ठूलोबाट सिक्ने हो ।
आर्थिक समृद्धिमा पहिलो फड्को मार्दै भेरी–बबई आयोजना
भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली बर्दिया र बाँके जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु-याउने र सोही पानीबाट ४६ दशमलव ८ मेगावाट अर्थात् चार सय गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको क्रममा छ ।
‘९० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन्छ’
कृष्णप्रसाद पन्थी कञ्चन गाउँपालिका रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । हुलाक, शिक्षा, सिँचाइ र स्थानीय निकायलगायतका क्षेत्रहरुमा कार्य गर्दै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका पन्थी स्पष्ट विचार राख्ने प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।
औद्योगीक एजेण्डा केहि ओझेलमा प-यो
अब अहिले तिन तहको सरकारको संरचना नेपाल सकारको नयाँ संरचना अनुसार भएको छ । उद्योगी व्यापारीहरुमा यो चुनाव पछि ठूलो उत्साह थियो । स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको खालि अवस्था थियो । प्रदेशिक तहमा पनि नयाँ सरकारको निर्माण । यसले अब उद्योग व्यापारलाई धेरै ठूलो राहत र उद्योग व्यवसायमा देश आगडी बढ छ ।
विकास निर्माणमा एकरुपता हुन जरुरी छ
गणेश न्यौपाने तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ रुपन्देहीका वडा अध्यक्ष हुन् । फरासिला वडा अध्यक्षको रुपमा चिनिने न्यौपाने सधैँ जनताका काम गर्न चाहन्छन् । राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरुमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका न्यौपाने २०४९ सालबाट राजनीतिक यात्राको सुरुवात गरेका हुन् । विद्यार्थी जीवनमा शैक्षिक संस्थामा इकाइ समितिको सचिव भएर कार्य अनुभव सँगालेका न्यौपाने आठ/नौ वर्षको उमेरदेखि नै मुलुक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिष्टहरुको नारा उचित लागेर एमालेको राजनीतिमा लागेका थिए र एमालेकै राजनीतिबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुन सफल भए ।
कर्मचारीको अनिच्छा विकटले सृजना गरेको बाहना हो
नेकपा एमालेको राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका केशव नन्द बानिया मर्चवारी गाउँपालिका रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन् । मधेश आन्दोलनको समयमा पार्टी परिवर्तन गरी संघीय समाजवादी फोरमको राजनीतिमा लागेका बानिया फोरमकै राजनीतिबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । कर्णालीसँग तुलना गर्न सकिने मर्चवारी विकास निर्माणमा पछाडी परेको गाउँपालिका हो ।
स्वरोजगार समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो
अर्थशास्त्रमा एमए गरेका नारायण प्रसाद भण्डारी रम्भा गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष हुन् । २०४४ सालमा अनेरास्ववियूको राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका भण्डारी केही समय शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेका थिए । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावमा साबिक हुँगी गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित हुन सफल भण्डारी गाउँ, कमिटी, क्षेत्रीय कमिटीलगायत पार्टीका श्रेणीगत श्रेणीहरु पार गर्दै हाल जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यमा तेस्रो कार्यकालमा छन् ।